Musuqmaasuqa iyo kaalmada lacageed - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dab ka kacay bakhaar bateri ee magaalada Landskrona. Xir albaabada iyo daaqadaha. warar intaa dhaafsii-san P4 Malmöhus ka daalaco.
Musuqmaasuqa iyo kaalmada lacageed
La daabacay torsdag 27 augusti 2009 kl 17.33
Wasiirka gargaarka Gunilla Carlsson. Foto: Maja Suslin Scanpix
Wasiirka gargaarka caalamka soo goreya ee dalka Iswiidhen Gunilla Carlsson ayaa weerar af ah ee adag ku qaadey musuqmaasuqa lacagaha kaalmada ee dalkani u siiyo waddammada kale. Middaana si degdeg ah ey ugu saartey guddi ka soo baaraan dega sidii wax looga qaban lahaa ama loogu yareeyn lahaa musqmaasuqaa dhaqaalahaa, iyadoona ugu dambeeyn bisha Diseember ee sannadkan 2009 la fileyo in guddigaasi gacanta u geliyo wasiiradda toban qodob sidii middaa wax looga qaban lahaa.
Dhaqaalaha gaarsiisan 30-ka Milyaard ee dalkani sannad walba u gudbiyo waddammada saboolka ayaan la ogeeyn inta ku baxda ama ku qasaarta musuqmaasuqa, sida uu sheegey caalinka magaciisa la yiraahdo Stefan de Vylder, ahna dhaqaale yahan ku hoowlgeli jirey su'aalaha la xiriira kaalmada dhaqaale ee dalkani u fidiyo waddammada saboola ah.
- Wax badan lagalama socodo dhaqaalaha ku baxa musuqmaasuqa. Tan kale intan yar ee laga ogaado waa dhibic biyo ah ee badda lagu shubey, waayo dhaqaalaha ku baxa musuqmaasuqa maaha wax bannaanka yaal ee cid waliba arki karto.
- Dhaqaalaha taakuuleeynta ee dalkan u qoondeeyo waddammada ey wadashaqeeynta dheer leeyihiin, ayaa marar badan ey dhici kartaa inuu dhiirigeliyo musuqmaasuqa. Waana mid loo baahan yahey in dood laga sameeyo sidii wax looga qaban lahaa, sida ey tiri Gunilla Carlsson, ahan wasiirka kaalmada ee waddammada saboolka.
Arrinkan la xiriira musuqmaasuqa iyo kaalmada dhaqaale ee waddammada saboolka ayaan aheyn dood cusub, kuwaasina oo tusaale loogu soo qaadan karo dalka Saambiya oo sannadihii 2008/2009 si musuqmaasuq ah loogu lunsadey 50 malyan ee koronka iswiidhishka. Lacagtaasina oo malyuun ee ka mid ah ey ka timid cashuur bixiyeyaasha dalkan Iswiidhen.